Kooxda Shabaab oo laga yaabo in laga dabciyoculeysyada kaka furan Hiiraan hadii ay iskudayan Ahalusuna iney Hiiran soogalan.
Posted by admin on November 21 2011 12:01:17
HS:-Kooxda Shabaab oo laga yaabo in laga dabciyo culeysyada kaka furan Hiiraan hadii ay iskudayaan Ahalusuna Galgaduud iney Hiiraan soogalaan.sababtu maxey tahay? wararka Nov,21/2011
HS:-Kooxda Shabaab oo laga yaabo in laga dabciyo culeysyada kaka furan Hiiraan hadii ay iskudayaan Ahalusuna Galgaduud iney Hiiraan soogalaan.
Shacabka Hiiraan oo dagaalo ba'an kula jira kooxda mayalka adag ee Shabaab ayaa u muuqda kuwa dhawrkii maalmood ee ina dhaaftay ka hadlayey waxa laga yeelayo hadii ay isku dayaan kooxda Ahalusuna waljameeca ee fadhigoodu yahay Galgaduud iney dhulka Hiiraan soo galaan?
Warbixin xaqiiqada Hiiraan ka jirta taabaneysa ayaanu ka soo diyaarinay qeybaha kala duwan ee shacabka Hiiraan waxeyna jawaabtoodii noqotay sidan.
Ahalusuna waa koox ku dhisan qabiil waxbana aan dhaamaan kooxdii iyada ka horeysay ee Xizbul Islaam ee uu garwadeenka ka ahaa Hasan Daahir Aweys kooxdaasi oo markii danbe ku bur burtay gacanta bulshada reer Hiiraan kadib markii ay kooxda Shabaab ka daayeen culusyadii ay Hiiraan kaka hayeen ciidamada mujaahidiinta reer Hiiraan sidaasina Shabaab ku qabsadaan Belet weyne kadibna markii ay bur bureen Xizbul Islam dib loo bilaabay dagaaladii lagula jiray Shabaab.
Waxaa kale oo iyaduna in la xasuusto u baahan xili ay ciidamo Ahalusuna ah isku dayeen iney ka dagalamaan gudaha magaalada Belet weyne mar hada laga joogo sanad iyo bar waxaa hubkii ka firtay shacabkii ujeedada laga laahane waxey aheyd in aysan Ahalusuna magaalada Belet weyne ka arimin.
Mar aanu si gooyni ah ula xariirnay saraakiisha ciidamada ee reer Hiiraan kuwooda ku kala sugan Hiiraan iyo Mogdisho xili hore oo maanta ah ayaa waxey jawabtoodu noqday hada kama hordhaceyno laakisne Ahalusuna Galgaduud Hiiraan kama talineyso awoodkasta iyo ciidamo kasta oo ay soo wataan ayeyna hadalkooda kusoo kaabiyeen saraakiishii aanu kala xariirnay Mogdisho.
Laakinse kuwa Hiiraan iyagu fikir kaas ka duwan ayey qabaan waxeyna leeyahiin kama hor dhaceyno iyagoo hadalkooda kusoo koobay hadii qabiil Somaliyeed qabiil kale qabsan karo horey ayey arintaas u soo fashilantay hadana mid cusub in naloogu dayo kama hordhaceyno ilaa aanu xaqiiqda ka aragno ayeyna hadalkooda ku soo gaabiyeen.
Mar ay ka hadlayeen dhinaca TFGda ayey sheegeen in aysan wax walwal ah ku heyn TFGda waayo ayey yiraahdeen TFGda dagalkeeda ugu badan waa in ay radiyaasha Mogdisho ka dhahaan Hiiraan ciidamo TFGda ah ayaa qabsaday amaba ay u soo diraan shaqsi reer Hiiraan ah oo ay jago soo siiyeen marka kuwaasi ayey sheegeen iney ula macamilayaan sidii ay kuwii ka horeeyey ula macaamili jireen cidkasta oo reer Hiiraan ahne ay talada Hiiraan u furan tahay iney ka qeyb qaatado.
Marka laga soo tago jawaabaha ay saraakiishu ka bixiyeen dhaqdhaqaaqyadan cusub hadane wey adag tahay in kooxda Ahalusuna ka arimiyaan gudaha Hiiraan xeeladkasta oo ay isticmaalaan mid lidi ku ah ayaa hor taalo maadama gudaha Hiiraan looga arko koox xukun raadis ah oo dooneysa iney beesha caalamka kula korkortanto iney ka taliyaan dhulweeyn amaba gobolada dhexe si ay xukunka uga tuuraan TFGda.
Warar aan la hubin ayaa shegaya in ciidamada reer Hiiraan u qorsheysan tahay hadii ciidamada Ahalusuna soo galaan Hiiraan iyagoo ka yimid Galgaduud in loo baneynayo amaba laga daaynayo dagaalka tooska ah ee lagula jiro Shabaab Miinadana laga saari doono jidadkii ay hada ka hor gooyeen ciidamada Mujaahidiinta reer Hiiraan oo ay kooxda Shabaab doonayeen iney ka weeraraan gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Qaar ciidamada ka mid ah waxeyba leeyahiin nimanku hadii ay doonayan iney gobolada dhexe ka huriyaan dagaal qabiil iyagaa imaan doona ee hala daayo iyo wax la mid ah.shir ay dhawaantan iskugu yimadeen Ahalusuna Galgaduud kuwooda ka soo jeeda Magaalooyinka Guriceel iyo Dhusamareeb ayey ku sheegeen in aysan aqoonsaneyn wax la yiraahdo maamul goboleedyada ka curtay dalka. inkastoo markii danbe qaar kooxda ka mid ah oo iyaguna ka soo horjeeda sheegeen in uu hadalkaasi ku egyahay deganada laga sheegay oo ay ula jeedeen inuu yahy go,an ka yimid dad gaar ah.
Ahalusuna gobolada dhexe qab noocee ah ayey u shaqeeyaan?
Ahalusuna marka magaceeda laga hadlayo dhawr nooc ayaa loo fasiran karaa sida in ay yahiin walaalahii dooxada Juba ee ka arimin jiray Jubada Hoose waqti hada laga joogo dhawr sano. meelaha qaarkood waxaa looga yaqana urur u shaqeeya sida midkii ay horey u sameysteen hogaamiya kooxeedyadii ee Argagixiso la dirirka oo ay xiligaasi dalka ka dhoofin jireen culimada Somaliyeed.kuwaanina waa la mid oo waxey dadka reer miyiga ah ka qabqabtan xadka gobolka Galgaduud kadibna waxey yiraahdaan waa kooxaha dagalka ka wada gudaha Ethiopia iyagoo bartamahii bishii ina dhaftay dad aan waxbo galabsan xadka Somaliya iyo Ethiopia ka qafaalay kadibna aan ilaa hada war iyo wacaal laga heyn meesha lala aaday.
Kooxdu marka ay joogaan Galgaduud iyo gobolada kale ee Somaliya sida qeyb ka mid ah Mogdisho amaba Gedo isku fikir iyo siyaasad maahan kooxkasta waxey u shaqeysaa sidey iyadu jeceshahay amaba maslaxadeeda ay ku jirto. laakinse marka laga hadlayo shacabka Hiiraan waxey si toos ah kooxdaan ugu arkaan koox qabiil oo dano quracan ka leh siyaasada guud ee Somaliya.
Ugu danbeyn waxaanu warbixin ka soo diyaarinay qeybaha kal aduwan ee bulshada Hiiraan ee kunool magaalooyinka waweyn la soco wararkeena danbe.